ပန်း ကောင်း အ ညွန့် ချိုး – Grab Love Story
သ မီးလေးအရွယ်ရောက်လာတော့ မကေသီတစ်ယောက်စိတ်တွေပူလာ ရပြီ။ခုခေတ်ကလေးတွေကကဲမှကဲ ဆက်စ် ကိစ္စကိုထမင်းစားရေသောက် လုပ်သလိုဖြစ်နေပြီ။အချိန်ပိုင်းနှင့် ငှားတဲ့ဟိုတယ်တွေကလဲပေါမှပေါ ဆိုသလို အွန်လိုင်းပေါ်မှာတင်ချိန်း ဆိုနေကြတာ။တယ်လီဖုန်းဆင်းကဒ်တွေကလဲပေါမှပေါ။လူမှု့ဆိုရှယ်ဖေ့ဘွတ် တွေသုံးနေကြတော့ ခုခေတ်ကလေး တွေထိန်းချုပ်ရတာမလွယ်တော့ပါ ဘူးလေ။ ကိုယ်တွေခေတ်တုန်းကနဲ့မတူဘူး။ တစ်ခုခုဆိုရင်အင်တာနက်ပေါ်ရောက်သွားပြီ။ အဲဒီခါမှအိမ်ကလူတွေသိပြီးအရှက်တကွဲအကျိုးနဲတွေဖြစ်ရရတော့တယ် ။တွေးနေတုန်းရှိသေးတယ် သမီးလေးကစကပ်အတိုအပြတ်နဲ့ မျက်နှာမိတ်ကပ်လိမ်းပြီးအိမ်ပေါ်က ဆင်းလာတော့ “သမီး ညည်းဘယ်သွားမလို့တုန်း” “သူငယ်ချင်းနဲ့ချိန်းထားလို့မာမီ’ “ဘယ်ကသူငယ်ချင်းလဲသမီး” “မာမီကလဲအပြင်တစ်ခါသွားရင် စစ်လားမေးလားနှင့်သမီးအသက် ဆယ့်ရှစ်နှစ်ပြည့်နေပြီ” “ဟဲ့နင့်ဟာနင်ဆယ့်ရှစ်နှစ်မကလို့ ရှစ်ဆယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နင်ဟာငါ့သမီးပဲ” “မာမီ့သမီးမာမီသမီးပေါ့ဒါပေမယ့် နေရာတိုင်းတော့သမီးကိုမချုပ်ချယ် ပါနှင့်မာမီ” “ငါချုပ်ချယ်နေတာမဟုတ်ဘူး၊ မသူတော်တွေနဲ့တွေ့မှာစိုးလို့ဟေ့” “သမီးမှာလဲစဉ်းစားတတ်တဲ့ဦးနှောက်ရှိတယ်မာမီ” “အေးနင်တို့ဦးနှောက်နှင့်မျက်လုံးက မျက်တောင်မွေးတဆုံးတောင်ကြည့် တာမဟုတ်ဘူး၊လူဆိုတာရှေ့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူး” “မာမီ ဓာတ်ပြားဟောင်းတွေလာဖွင့်မနေနဲ့တော့၊မိန်းကလေးဆိုတာဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိနေရမယ်၊ ကိုယ့်ဘဝကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမယ်၊ ဒါတွေပဲပြောမှာမဟုတ်လား၊ တော်ပါပြီသမီးအာ့တွေကိုနားရည်ဝ နေပြီ” ပြောရင်းဆိုရင်းထွက်သွားသော သမီးကိုကြည့်ရင်းသက်ပြင်းချ လိုက်မိသည်။
ဒေါ်ကေသီတစ်ယောက်ဝဋ်လည်ခြင်းပေလားမသိပေ၊မိမိ အပျိုဘဝတုန်းကလဲမေ့မေ့စကား နားမထောင်ခဲ့လို့အိမ်ထောင်ကျမှ စိတ်ဆင်းရဲမှု့တွေကိုခါးစည်းခံနေရ တော့သည်။ဘယ်သူမပြုမိမိမှု့ပါ။မိမိဘာသာကြိတ်မှိတ်ခံစားရင်းနောင် တတွေရပြီးသမီးလေးကိုမိမိကဲ့သို့ မဖြစ်လိုတော့ပေ။ထို့ကြောင့်သမီး လေးအားထိန်းချုပ်ခဲ့ရာမှသမီးမှ မိမိအားအမြင်မှားအထင်မှားတွေ ဖြစ်ရတော့သည်။တကယ်တော့မိမိအမှားကိုမိမိချစ်သောလင်မှလွဲ၍ မည်သူ့ကိုမျှမပြောပြခဲ့ပေ။ ငယ်ရွယ်စဉ်ကကြုံဆုံခဲ့ဖူးသောဖြစ်ရပ်တစ်ခုကကေ့ဘဝကိုယခုခြိမ်း ခြောက်နေဆဲပင်ဖြစ်ပြီးထိုအတွေး များဝင်လာပါကငါအမှားကြီးတစ်ခုပြုလုပ်မိလေခြင်းဟုတွေးမိသည်။ ထိုအမှားမျိုးကိုသမီးလေးကိုထိုသို့မဆုံတွေ့စေ လိုပါ။တွေးမိရင်းငယ်ကအကြောင်း တစေ့တစောင်းပေါ်လာရတော့ သည်။ ကေသီ တက္ကသိုလ်စ တက်တဲ့နှစ်မှာပဲသင်္ချာမေဂျာက ဒုတိယနှစ်သမားဖြစ်တဲ့ကျော်စွာ ရဲမြင့်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်။အသားဖြူပြီးအရပ်ရှည်တယ်။ဆံပင်ပုခုံးထောက် နှင့်လိုက်ဖက်တဲ့ကျော်စွာရဲမြင့်ကို တွေတဲ့အခါမှာတော့ရင်ခုန်သံဆိုတာ ကိုစတင်ခဲ့မိတယ်။စတွေ့ပြီးနောက် ပိုင်းမှာပဲစာသင်ခန်းရှေ့တဝဲဝဲလည် နေတဲ့ကျော်စွာကြောင့်ရွှေစွန်ညို ဘာလိုလို့ဝဲမှန်းသိနေကြပြီလေ။ ကေသီကိုယ်တိုင်ကသဘောကျတာ ကြောင့်သူငယ်ချင်းတွေကောင်းမှု့နဲ့ ကျော်စွာနှင့်ကေသီရည်းစားဖြစ်ကြ လေသည်ပေါ့။ချစ်စခင်စကြင်နာစ မှာမိုးမမြင်လေမမြင်အချစ်နဲ့အချစ် ရူးခဲ့ရသူကကေသီ၊ဘဝမှာပထမဆုံး ချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့အချစ်ဦးဆိုတော့လဲ ကျော်စွာမှလွဲပြီးမည်သူ့ကိုမှချစ်နိုင်တော့မည်ဟုမထင်ပေ။ကျော်စွာသာ အချစ်၊ကျော်စွာသာဘဝဟုထင်မှတ်ခဲ့လေတော့ကျော်စွာပြောသမျှသာ အဟုတ်ထင်ခဲ့သည်။မိဘပြောတာကိုပင်အကောင်းမထင်နိုင်လောက် အောင်အချစ်ဆိပ်တို့မွန်ခဲ့သည်။
ကျော်စွာ၏အပြုအစုအယုအယတို့ မှာရစ်မူးခဲ့သည်။ကျော်စွာပြောသမျှနားဝင်ခဲ့သည်။ လူလစ်တို့သောနေ ရာတို့သည်ကေသီနဲ့ကျော်စွာတို့၏ ချစ်ဗိမာန်။နှစ်ဦးသားတွေ့သည့်အချိန်တို့သည်ကြည်နူးစရာအတိ။ ရင်ခုန်ခြင်းတို့နှင့်အတူချစ်စိတ်တို့မွှန် ခဲ့သည်။ကျော်စွာကခန္ဓာကိုယ်ခြင်း ထိတွေ့ခြင်း၌အားမရပေ။ကေသီလည်းထိုနည်းတူစွာပင်။ လူသူကင်းမဲ့ပြီးဆိပ်ကွယ်ရာအရပ်သည် ချစ်သူစုံတွဲတို့၏စိတ်ကိုကာမတဏှာကြီးစိုးလေသည်။နှုတ်ခမ်း ချင်းနမ်းရှုပ်ခြင်းနို့ကိုင်ခြင်းအစရှိ သည်တို့ကိုလုပ်ကြသော်လည်းလူမိမည်စိုး၍လွတ်လပ်စွာလုပ်၍မရပေ ။ကျော်စွာစိတ်တို့မချင့်မရဲဖြစ်သလိုကေသီလည်းထိုနည်းတူစွာပင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ထိုသို့သောကာမအရာတို့၌ သေသီရစ်မူး၍လာသည်။ တနေ့တော့ “ကေ” “ဟင် ဘာလဲကိုကို” “ဒီနေ့ကျောင်းလစ်ပြီးအပြင်သွား ရအောင်” “ဘယ်သွားမလို့လဲကိုကို” “နားအေးပါးအေးရှိတဲ့နေရာကိုပေါ့” “ဟင်ကိုကိုကဘယ်သွားချင်လို့” “ဟိုတယ်သွားမလားလို့” “ဟာ ကိုကိုကလဲရှက်စရာကြီး၊လူ တွေမြင်မယ်ကွာ” “လူမမြင်တဲ့နေရာကိုသွားမှာပေါ့” “ကေကြောက်တယ်ကိုကို” “ဘာကြောက်စရာရှိလို့ကေရာ” “ကေတစ်ခုခုဖြစ်မှာစိုးတာ” “ကေကလဲကိုကိုစီစဉ်ပြီးသားပါကေ”ဟင်” “ကေနှင့်အပြင်မှာတွေ့ရမယ့်အရေး ကိုကိုအများကြီးစဉ်းစားပြီးစီစဉ် ထားတာ” “ဟာကွာ ကေသီမသွားရဲဘူး” “ကေ ကိုကို့ကိုချစ်တယ်မဟုတ်လား” “ချစ်တာပေါ့ကိုကို” “ကိုကို့ကိုချစ်ရင်ကိုကိုပြောတာနား ထောင်လေ” “ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုရယ်” ကေသီနားလည်ပါသည်။ဟိုတယ် သို့ခေါ်ပြီးကေအားကိုကိုစိတ်အလိုကျကေနေပေးရလိမ့်မည်။ဤခန ဖြင့်ကေသီ၏အပျိုစင်ဘဝကုန်ဆုံးရပေမည်ကိုတွေးမိသည်။
သို့သော် ကေသီချစ်သောကိုကိုနဲ့လည်းနေ ချင်သည်။စိုးရိမ်စိတ်ကိုချစ်စိတ်နှင့် ကာမစိတ်ကလွှမ်းမိုးသွားခဲ့သည်။ ဤသို့နှင့်ကိုကိုခေါ်ရာဟိုတယ်သို့ ကေသီလိုက်ပါခဲ့တော့သည်။ ခေါ်တယ်ဆိုတော့လဲကေသိ နေပါပြီ။မလိုက်ချင်လဲချစ်သူ့အလိုကျလိုက်ခဲ့ရပြီပေါ့လေ။ ဟိုတယ်ရောက်ရင်ကိုကိုကကေ့ကို နမ်းတော့တယ်။ကေလဲရင်ခုန်တယ်။ “ကေအဝတ်တွေချွတ်လိုက်ရအောင်””ကိုကိုကလဲရှက်စရာကြီး” “ကေကလဲပြန်ရင်အဝတ်တွေကြေ ပြီးကေ့မိဘတွေရိပ်မိမယ်” “ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကို” ကေ့ကို ကိုကိုကအဝတ်တွေကူချွတ် ပေးတယ်။အဝတ်တွေချွတ်လိုက်ပြီး ကေကကေ့ရဲ့ရင်သားနှင့်ပိပိကို လက်နှင့်ကွယ်လိုက်သေးတယ်။ ကိုကိုလည်းအဝတ်တွေချွတ်တော့ သူ့လီးကြီးပေါင်ကြားမှာတရမ်းရမ်းနဲ့မို့ကေမှာကြည့်ပြီးရင်တထိတ် ထိတ်နဲ့ဖြစ်သွားကာရင်ဖိုသလိုဖြစ် သွားရကာဒီလီးကြီးနဲ့မိမိမှာ အလိုးခံရတော့မည့်အရေးတွေးကာစိတ်ထဲတမျိုးဖြစ်သွားရပြန်တော့တယ်။ “လှလိုက်တာကေရာ၊ကေနို့လေးက ဝိုင်းပြီးတင်းရင်းနေတာပဲကွာ” ကေ့လက်ကိုဖယ်ပြီးဒီလိုပြောတော့ ကေကြည်နူးမိတယ်။ “”ဒီလက်ကလေးကိုပါဖယ်ပေးပါဦး ကေရာကိုကိုအရမ်းကြည့်ချင်နေပြီ” ပိပိကိုကွယ်ထားတဲ့လက်ကိုဖယ်ပြန်တယ်။ “ဟာ အရမ်းကိုလှလိုက်တာကွာ၊ ဖောင်းပြီးဖြူဖွေးနေတာပဲ” ဒီလိုပြောတော့လဲစိတ်တွေကြွလာသလိုခံစားမိတယ်” “ဟာကွာ ကိုကို ကေရှက်တယ်ကွာ” ကေကပြောပြီးနို့နှင့်အဖုတ်ကို လက်ဖြင့်ကာလိုက်ပြန်တယ်။ “အရမ်းချစ်တယ်ကေ” ဒီလိုအချိန်မှာဒီစကားမျိုးကြားရ တာစိတ်ကိုပိုပြီးရဲတင်းသွားသလို မျိုးဖြစ်ရတယ်။
ကိုကိုကကေ့လက်တွေကိုဖယ်ပြီး ကေ့နို့ကိုတပြွတ်ပြွတ်စို့တယ်။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်” “,အို့! အာ့ အင်းဟင်းးးဟင်းး” နို့စို့ပေးပုံကအရင်ကလိုမ ဟုတ်ပြန်ပါဘူး။လွတ်လွတ်လပ် လပ်စို့ရလို့လားမသိဘူး။ကိုကိုကနို့အုံတစ်ခုလုံးငုံစုပ်လိုက်၊ကလေးနို့စို့သလိုစို့လိုက်၊နို့သီးခေါင်းထိပ်ဖျား လေးတွေကိုလျှာနှင့်ယက်လိုက်နဲ့ လုပ်ပေးနေတယ်။အစကတည်းကဒီအနေအထားကိုမျှော်မှန်းထားပြီး ရင်ခုန်နေသူမို့စိတ်လာပြီးထောင် ထနေတဲ့နို့သီးခေါင်းလေးဟာ၊ကျိမ်းသွားလိုက်ကောင်းလိုက်နဲ့ရသနှစ် မျိုးကိုပေးနေတယ်။ကာမစိတ်ကတဖြေးဖြေးတိုးလာတာမို့ကေအလိုအ လျောက်ညည်းမိတော့တယ်။ “အင်း ဟင်းးဟင်းးး” ကေမှာအလိုအလျောက်ညည်း သံတွေထွက်လာတယ်။ပိပိထဲကလဲ ယားယံလာခဲ့တယ်။ပိပိကပိုပြီး ဖောင်းကြွလာသေသလားထင်မိ တယ်။ ကိုကိုကျော်စွာကနို့စို့ရင်း ပင်ပိပိကိုပွတ်ပြန်တယ်။မအော် ညည်းမိအောင်ထိန်းသော်လည်း ထိန်းသိမ်းမရပေ။ညည်းသံတို့စိပ် လာသည်။နို့စို့ပေးပြီးကိုကိုက အောက်သို့ထပ်မံလျောချပြီးဆီး ခုံနေရာကိုနမ်းလိုက်သည်။ထိုသို့ပြုလုပ်တဲ့အခါကိုကိုတစ်ယောက်ဘာ လုပ်တော့မည်ကိုတွေးမိပြီးကေ့မှာတကိုယ်လုံးကြက်သီးနွေးထလာပြန် သည်။ကေတားချိန်မရလိုက်ပေကိုကိုကကေ့အဖုတ်ကိုကိုမျက်နှာ အပ်နေပြီးပိပိအကွဲကြောင်းထဲကိုပူနွေးနွေးလျှာကပွတ်ဆွဲသွားချေ သည်။ “အားးး ရှီး ကိုကိုမလုပ်ပါနဲ့ အိုး” လူတကိုယ်လုံးတုန်တက်သွားသလိုခံစားလိုက်ရသည်။
အကွဲကြောင်းထဲ လျှာကတိုးဝင်လာပြီးကလော်သွား ပြန်သည်။ “အာ့ အာ့ ကိုကိုကေ ငရဲကြီးပါ့မယ်၊ပြီးတော့ ကေပြန်မလုပ်နိူင်ဘူးနှော်” အစေ့ကိုတပြွတ်ပြွတ်စုပ်လိုက်။ ကလော်လိုက်ပိပိအခေါင်းထဲလျှာထိုးထည့်ပြီးမွှေလိုက်မို့ကေမှာခါးကအိပ်ရာပေါ်မထိပဲလေထဲမြောက်နေသည်။ ပိပိထဲမှအရည်တို့လဲတစိမ့်စိမ့်ထွက် ကျလာပြီးအိပ်ရာခင်းစကိုသာလက်နှစ်ဖက်နှင့်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ညည်း မိတော့သည်။တောင့်ထားရသဖြင့် ဗိုက်ကြောတွေလဲတင်းလာသည်။ “အားးကိုကိုတော်ပြီကေလေ မခံနိုင်တော့ဘူး” “ကေ” “ဟင်” “ကိုကို့ကိုလဲစုပ်ပေးပါလား” “ဟင့်အင်းကေ မစုပ်ရဲဘူးကိုကို”” “စုပ်ကြည့်ပါလားကေရာ” မစုပ်ဘူးဆိုတော့ကိုကိုကကေပါး စပ်ထဲလီးအတင်းထည့်တယ်။ ကိုကိုရဲ့လီးကိုပါးစပ်ထဲဝင်မလာ ရအောင်ငြင်းဆန်ပြီးအိပ်ရာကလူးလဲထလိုက်ပြီးထိုင်လိုက်သည်။ “မလုပ်နဲ့ကိုကို ကေအန်ထွက် လိမ့်မယ်၊နောက်မှလုပ်ပေးမယ်နှော်ကိုကို” “အင်းပါနောက်တစ်ခါဆိုရင်ကိုကို့ကိုပြန်လုပ်ပေးနှော်” “ဟုတ်ကဲ့ကိုကို” “ဒါဆိုကိုကိုလုပ်တော့မယ်နှော်” “အင်း” ကိုကိုကပက်လက်ကလေးအိပ်နေတဲ့ကေ့တင်ပါးအောက်ကိုခေါင်းအုံးတစ်လုံးယူပြီးခုလိုက် တော့ကေ့ဖင်ကအပေါ်ကိုမြောက်တက်သွားချိန်မှာကိုကိုကကကေ့ ပေါင်ကိုမတင်လိုက်တယ်။ ကေကအလိုက်တသိကြွပေးလိုက်တယ်။ကေ့ပေါင်ကိုမတင်ပြီးတဲ့အခါ “ကေ့ခြေချင်းဝတ်ကိုလှမ်းဆွဲပေး” ကေလဲမိမိခြေချင်းဝတ်နှစ်ဘက်ကို လှမ်းဆွဲလိုက်တယ်။ထိုအခါကိုကိုကကေ့ရဲ့ပေါင်ကြားထဲဝင်ပြီး တောင်နေတဲ့လီးကြီးနှင့်ချောအဖုတ်အဝကိုတေ့ပြီးဖြေးဖြေးချင်း ဖိသွင်းလိုက်တယ် “ဗျစ် ဗျစ် ” “အာ့!ဖြေးဖြေး ကိုကို” စောက်ရည်နှင့်ချောနေတဲ့အဖုတ်ထဲကို လီးကအိကနဲဝင်သွားတယ်။လီးတဝက်လောက်ကျမှတင်းပြီးနာလာတယ်။
“အရမ်းနာတယ်ကိုကို” “ကိုကိုဖြေးဖြေးချင်းလုပ်ပါ့မယ်” “ဟုတ်” နာလွန်းလို့မျက်နှာရှုံ့မဲ့ပြီးသာပြော လိုက်ရတယ်။ ကိုကိုကလီးကိုဆက်မသွင်းသေးပဲ ပိပိထဲစိမ်ထားပြီးကေ့နှုတ်ခမ်းကကိုလာနမ်းတယ်။ ပိပိထဲစိမ်ထားတဲ့လီး ကြီးကြောင့်ကေ့မှာစိတ်ထဲတမျိုး ကြီးဖြစ်နေတယ်။ကိုကိုကနမ်းတော့ကေလဲပြန်နမ်းတယ်။နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်နမ်းပြီးလီးကိုမကျွတ်စေဘဲကေ့နို့ကို တပြွတ်ပြွတ်စို့ပြန်တယ်။နို့စို့ပေးတော့နာကျင်တာတွေတောင်ပျောက် ပြီးကာမစိတ်တွေပြန်ဖြစ်လာတော့ကေလဲညည်းမိတယ်။ ကေညည်းသံ ကြားရပြီးနောက်မှာတော့ကိုကိုကလီးကိုရှေ့သို့တိုးပြီးဖိသွင်းလိုက် တော့ “ဖြစ်ဗျစ် ဖောက်” “အာ့! အိုးးးအာ့လာ့လာ့” တချက်ဆိုတခက်ဆေိုသလောက် မျက်ရည်များကျလောက်အောင်ပင် နားသွားတဲ့ကေအော်မိလိုက်တယ် “အားးကွဲပြဲသွားပြီ အိုး နာလိုက်တာကိုကို” “ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကေ၊အမှေးလေး ပေါက်သွားတာပါ” တကယ့်ကိုနာကျင်မှု့ကိုခံစားလိုက်ရ တဲ့ကေသည်းခံနေလိုက်တယ်။ ထိုနောက်တော့ကိုကိုကတဖတ်ဖတ် မြည်အောင်လိုးတော့တယ် “ဖွတ်! ဖတ် ဖတ် ဖန်းဖန်း” “အာ့ အိုးးအင်းဟင်းးးဟင်းး” ကေအဖုတ်ကို လိုးဆောင့်တဲ့အချိန်ခနလေးအတွင်းမှာပဲကေ့စိတ်တွေထန်လာတယ် တစ်ခါမှမခံစားဖူးတဲ့အထိအတွေ့တမျိုးကိုခံစားရပြီးကေမှာအော် ညည်းသံလေးထွက်မိတော့တယ်။ကိုကိုလီးဒစ်ကားကားကြီးကမှိုပွင့် ကြီးလိုဖြစ်ပြီးအစေ့ကိုပွတ်ကာဆွဲသွားတယ်။
အဝင်အထွက် တိုင်းနာသလိုကောင်းသလိုနဲ့မို့ အရမ်းကိုဖီလ်းဖြစ်ပြီးညည်းမိတော့ တယ်။ “ဖွတ်! ဖန်း!ဖန်း !ဖန်း ” “အာ့!အိုး! ရှီးရှီးးးရှီးးး” ဆီးခုံချင်းရိုက်သံနှင့်ကေရဲ့အော် ညည်းသံတွေထွက်လာတယ်။ “ကေကိုကိုလုပ်ကောင်းရဲ့လား” “အာ ကိုကို အာ့ရှီးးရှီးး” “ဖွတ်ဖတ် ဖန်းးဖန်းးဖန်းး” ခြေချင်းဝတ်နှစ်ဘက်ကိုကိုင်ပြီး မျက်လုံးစုံမှိတ်ကာကေမှာ ကိုကိုရဲ့ဆောင့်လိုး ချက်တွေကိုခံစားရတော့တယ်။ ကာမအရသာကိုကောင်းလိုက်နာ လိုက်ခံစားနေရတယ်။စိတ်ထဲကတမျိုးဖြစ်လာတာကြောင့်ကိုကို့ကိုဖက် ထားလိုက်မိတယ်။ “ကေပုံစံပြောင်းလိုးရအောင်နှော်” “အင်းကိုကိုလိုချင်သလိုပြောလေကေပြောင်းပေးမယ်” “ကုန်းပေးနှော် ကေ” “ဟုတ်ကိုကို ကေပက်လက်အိပ်နေရာကထပြီး ကုန်းပေးလိုက်တယ်။ကေကဖင် ကုန်းပေးတာကပထမဆုံးဆိုတော့ ကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမရတာကြောင့် ပုံစံကျအောင်ကိုကိုကပဲပြုပြင်ပြီး ကေ့ပိပိဝကိုတေ့ကာလီးကိုကိုင် သွင်းလိုက်တယ် “ဗျစ် ဗျစ် ဗျိ” “အာ့!ကိုကို နာတယ်.ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ” လီးကိုတဆုံးအထိသွင်းပြီးကေရဲ့ ခါးကိုလှမ်းဆွဲပြီးတဖန်းဖန်းမြည် အောင်လိုးလိုက်တော့တယ်။ကေရဲ့ လုံးကျစ်ကျစ်ခါးလေးကိုကိုင်ပြီးလိုးတာမို့ကိုကို့စိတ်တွေထန်နေလို့လားမသိဘူးမြန်မြန်လေးဆောင့်လိုး တော့ကေ့မှာရှေ့ကိုလဲမသွားရ အောင်ထိန်းထားရတယ်။ကျပ်တည်းပိပိလေးကိုကိုကိုရဲ့လီးကထိုးခွဲပြီး ဝင်လာတယ်။ “ဘွတ် ဖွတ် ဖန်းဖန်းဖန်းး” “အာ့အိုးးရှီးးရှီးးး” ပုံစံပြောင်းပြီးလျော့သွားတဲ့ကာမ စိတ်ကကေ့ကိုတဖန်ပြန်တက် လာစေတယ်။ ဒီအကြိမ်ကတော့ဝင်ချက် တိုင်းထိစေတယ်။
သားအိမ်နားအထိကိုရောက်နေတာကြောင့်ပိုပြီးအရပ်ပုတဲ့ကေအတွက်အောင့်လာတယ်။ “ဖွတ် ဖန်းးဖန်းးဖန်းး” “အာ့ရှီးးရှီးးးအိုးး နာတယ်ကိုကို” ကိုကိုကလဲအပျိုစစ်စစ်လေးကေ့ကိုကိုအပီအပြင်လိုးရတာကြောင့်ကြပ် ထုပ်နေတာမို့ချော့လိုးတယ်ဆိုပေ မယ့်ပြီးချင်သလိုဖြစ်နေ တာကြောင့် “ကိုကိုပြီးတော့မယ် ကေ” “ဖွတ် ဖန်း ဖန်းးဘွတ် ဘွတ် ဖန်း” “အာ့ရှီးးရှီးးးအားပြီးပြီ အိုးး” ကေလဲကာမဆက်ဆံဖူးတာဒီတကြိမ်ထဲဆိုဆိုသလောက် အရသာထူးထူးဆန်းဆန်းကိုခံစားလိုက်ပြီးပိပိထဲကအရည်တွေစိမ့်ထွက်သွားသလိုခံစားရတယ်။ တကိုယ်လုံးလည်းတုန်ယင်ကာဆင်းသွားပြီးပါးစပ်ထဲက အီးကနဲအသံထွက်သွားတော့တယ်။ ပူနွေးနွေးသုတ်တွေကေအဖုတ်ထဲ ဝင်လာတော့ကိုကို့လီးကသုတ်ရည်တွေ ဝင်သွားမှန်းသိတော့လန့်သွားမိတယ်။ကေလဲမောပန်းသ လိုဖြစ်ပြီးအားကုန်သွားသလိုခံစားလိုက်ရပြီးကုတင်ပေါ်မှောက်ကျကာခနမှိန်းနေပေမယ့်ကိုကိုကတော့ အမောဖြေပြီးကေ့ကိုဖက်ထားတယ်လေ။ “ကေ ကောင်းလား” ကေကောင်းတယ်လို့တော့မဖြေရဲပါဘူး။နောက်တကြိမ်ထပ်လုပ်မှာလဲ စိုးရိမ်တယ်။ပိပိလေးကကြိမ်းစပ် နာကျင်နေတာကြောင့် “အရမ်းနာတယ်ကိုကို၊ကြိမ်းစပ်နေတာပဲကေ့ဟာလေးတော့ကွဲပြဲသွား ပြီလားမသိတော့ဘူး” “မကွဲပါဘူးကေရယ်၊အပျိုစစ်စစ် လေးမိုပထမအကြိမ်ကဒီလိုပဲတဲ့၊ နောက်အကြိမ်ဆိုရင်နာတာပျောက် ပြီးဖီးလ်တွေရှိတော့မှာ” “နောက်တကြိမ်မလုပ်ရဲတော့ဘူး၊ခု တောင်အရမ်းနာနေပြီ” “အင်း ခုနောက်ထပ်မလုပ်တော့ဘူး လေ၊နောက်တပတ်လောက်မှလုပ် မှာ” “မလာတော့ဘူးကွာ” “ကေကလဲကွာ” “ကေဗိုက်ကြီးရင်ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ၊ဖေဖေသတ်လိမ့်မယ်” “ကေဗိုက်မကြီးအောင်ကိုကိုဆေး တိုက်မှာပေါ့” “အဲဆေးတွေကကြာရင်မကောင်း ဘူးပြောကြတယ်ကိုကို” “ဥပါဒ်မရှိလိုထုတ်ထားတဲ့ဆေးတွေပါကေရာ” “အင်းပါကိုကို” ထို့နေ့ကကေ့ကိုဆေးတိုက်ပြီး ကေအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်၊ပိပိတစ်ခုလုံး ကြိမ်းစပ်နေပြီးဟန်မပျက်အောင် မနဲထိန်းနေရတယ်။
အိမ်ကရိပ်မိမှာတော့ကေကြောက်တယ်တယ်လေ။ နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ဒဏ်ခံလိုက်ရပြီးနောက်မှာတော့သက်သာသွား တယ်။ကိုကိုနဲ့လိင်ဆက်ဆံမှု့မလုပ် ရဲလောက်အောင်ကြောက်သွားပေမယ့်ကိုကိုနဲ့တွေ့တော့လည်းရင်ခုန် မိပြန်တယ်။ကိုကိုရဲ့လှုံ့ဆော်မှု့ ကြောင့်ကာမစိတ်ကတဖန်ဖြစ်လာ ပြန်ရော။ဒီလိုနဲ့နောက်တကြိမ်ကိုကိုနဲ့ဟိုတယ်ကိုလိုက်မိပြန်တယ်။ ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ပထမကြိမ်တုန်းကလိုကြောက်ရွံခြင်းမရှိတော့ပဲ ပိုမိုရဲတင်းသလိုဖြစ်လာပြီးကေကကိုကို့လီးကြီးကိုငုံစုပ်တတ်ခဲ့တယ်။ ကိုကို့ရဲ့စုပ်ယက်မှု့မှာလဲသာယာ တတ်ခဲ့ပြီ။။ပုံစံမျိုးစုံအောင်လဲ လုပ်တတ်လာခဲ့တယ်။ ကိုကိုကလည်းကေ့ကိုမတ်တပ်ရပ် ပြီးအောက်မှပင့်တင်ကာလိုးခြင်း ကေအားအပေါ်မှနေစေပြီးလိုးခိုင်း ခြင်းစသည့်အကွက်များဖြင့်စုံစိနေ အောင်လိုးပေးလိုက်သည်။ ဒုတိယအကြိမ်မှသည် ရည်စားသက်တမ်းတနှစ်ကျော်လာ သည်အထိတလတကြိမ်အနည်းဆုံး ကာမဆက်ဆံခဲ့ကြသည် ။ကျောင်းလစ်ပြီးအပြင်ကိုခနခနထွက်သဖြင့်ကေမိဘများကသံသယဝင်လာသည် ။ကေအားကျောင်းအထိလိုက်လံ ကြည့်ရှူ့တတ်လာသည်။ထိုအခါကေတို့သမီးရည်းစားကအပြင်မထွက်ပဲ ကျောင်းမှာပဲကျောင်းတက်နေရ သည်။များမကြာမှီမှာပင်ကိုကိုတစ် ယောက်သူလိုသည်ကိုမရ၍စိတ်ဆိုး လာသည်။ကေအမျိုးမျိုးတောင်း ပန်သည့်ကြားမှပင်ကိုကိုတစ် ယောက်ကေဆီအလာကြဲသလိုခြေလှမ်းတို့တခြားတစ်ယောက်ဆီလှမ်း တော့သည်။
ကိုကိုကျော်စွာတစ် တစ်ယောက်အခြားသောမိန်းက လေးနှင့်ပေါ်တင်တွဲလာသည်နှင့် ထိပ်တိုးရာ “ကိုကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲကိုကို” “ကေ ငါ့ကိုဖြတ်လိုက်တော့၊နင့်နဲ့ငါ ဘာမှပတ်သက်စရာမလိုတော့ဘူး” “ဘယ်လိုကိုကို ဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့ ပြတ်လို့ရလို့လား” “ဘာလို့မရ ရမှာလဲ၊ငါလဲငါတကယ် ချစ်တဲ့သူနဲ့တွေ့နေပြီ၊သူနဲ့ပဲလက် ထပ်မှာ၊ငါ့မိဘတွေလဲသဘောတူ တယ်” “ဘာ ! နင်နှမချင်းကိုယ်ချင်းမစာဘူး” “ဘာလဲဟာနင်လဲစိတ်ပါလို့ဖြစ်တာ နင်သဘောမတူရင်ငါဘာမှလုပ်လို့မရတာပဲ” “ဘာပြောတယ် နင် နင် သိပ်ရက်စက်တာပဲ” ပြောရင်းကျော်စွာတစ်ယောက် ထွက်သွားလေတော့သည်။ ဖုန်းအကြိမ်ကြိမ်ဆက်သော် လည်းမရသဖြင့်ကေမှာကိုကျော်စွာ အားစိတ်နာပြီးကျန်ခဲ့တော့သည်။ စိတ်နာသော်လည်းအရှက်နဲ့ဂုဏ် သိက္ခာကိုငဲ့ရ၍တုန့်ပြန်ခြင်းမှာမ တတ်နိုင်ခဲ့ပေ။မိန်းကလေးတစ် ယောက်အတွက်ပထမဆုံးအချစ် မှာကေတစ်ယောက်ကျဆုံးခဲ့ရသည် ။နောက်ထပ်ချစ်ရမည့်သူကိုပင်တွေ့နိုင်တော့မည်ဟုပင်မထင်ခဲ့ပေ။ကေ တစ်ယောက်ကျောင်းပြီးသည်အထိ နောက်ထပ်ချစ်သူမထားတော့ပေ။ သို့သော်ကျောင်းပြီးသောအခါတွင် မူနောက်တစ်ယောက်နှင့်ဆုံတွေ့ခဲ့ သည်။သူသည်ကားကေ၏အိမ်ဦး သခင်ဖြစ်လာမည့်သူပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသူကားကျော်သူရဖြစ်ပြီးကေ့မိဘများကပင်သဘောကျရသူဖြစ် သည်။သို့သော်အတင်းအကြပ်စီမံ ခြင်းတော့မရှိပေ။ကိုကျော်သူရကလည်းကေ့ကိုချစ်ရေးဆိုသည်။ ကိုကျော်သူရသည်။အနေအေး သော်လည်းကေ့အတွက်ကိုတော့ဦးစားပေးအလေးထားသည်။ကေ မျက်နှာညိုသည်ကိုပင်သည်းသည်းလှုပ်သည် ။ကေလိုအပ်ချက်မှန်သမျှကိုကျော်သူရကချက်ချင်းပင်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ သို့သော်ကေက ကို ကျော်သူရကိုအဖြေမပေးပဲစောင့် ကြည့်ခဲ့သည်။ကျော်သူရကလည်းဇွဲကောင်းလွန်းသည်။ကျော်သူရက ကေ့အပေါ်အမှန်တကယ်ချစ်မှန်းကေသိသည်။တဖြေးဖြေးနဲ့ကျော်သူရကကေ့ရင်ထဲနေရာဝင်ယူလာ သည်။ကေကျော်သူရကိုတကယ် ချစ်သွားတော့သည်။တကယ်ချစ်မိသောအခါစိတ်မကောင်းလည်းဖြစ် မိသည်။နောက်တော့မိမိချစ်ရသူအတွက်အဖြေပေးလိုက်သည်။
သို့ရာတွင်လက်ထပ်ရန်ပြောသောအခါကေတစ်ယောက်အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြတော့သည် “က်ကေိုကိုတို့လက်ထပ်ကြမယ်လေ ကွာ၊အချိန်မဆွဲနဲ့တော့ကေ” “ဘာလို့လဲကိုကိုကျော်ရယ်၊ကေက လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်သေးလို့ပါ” “ကေဘာတွေစဉ်းစားနေတာလဲ တော့ကိုကိုမတွေးတတ်တော့ဘူး၊ ကိုကိုကတော့ကေ့ကိုချစ်လွန်းတော့ မိဘတွေကိုဖွင့်ပြောပြီးတောင်းရမ်း ချင်နေပြီ၊ကေလက်မထပ်ချင်တာ ကိုကို့ကိုတကယ်မချစ်လို့လားလို့ တောင်ထင်နေပြီ” “ကေကိုကိုကျော့်ကိုတကယ်ချစ် ပါတယ်၊ဒါပေမယ့်…” “ကေ လက်မထပ်ချင်လောက်တဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်တစ်ခုအဖြစ်လက်မခံနိုင်လောက်တဲ့အပြစ်ကိုကိုကျော် မှာရှိနေလို့လားကေ” “ခက်တယ်ကိုကိုကျော်ရယ်၊ကေဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ ဘူး” “ပြောပါကေ၊ကိုကို့ကျော်မှာအပြစ် ရှိရင်ကိုကိုကျော်ပြင်မှာပါ” ဒီတစ်ခါတော့ကေဆုံးဖြတ်မှရတော့မည်။ မိမိကမပြောပဲကိုကိုကျော်သူ့မိဘများကိုဖွင့်ပြောပြီးလာရောက် တောင်းရမ်းယူမည်ဆိုလျှင်ကေမိဘများကလက်ခံမည်ကိုကေသိနှင့်နေသည်။ ထိုအခါကေလည်းငြင်း၍ရ တော့မည်မဟုတ်ပေ။ဤသို့ဆိုလျှင် ကေသည်ကိုကိုကျော်အားလိမ်ညာ လက်ထပ်သူဖြစ်ပြီးလက်ထပ်သည့်နေ့တွင်ပင်မိမိအပျိုစင်မဟုတ်သည် ကိုကိုကိုကျော်သိပြီးမိမိအားရွံရှာ နိုင်သည်။အခန့်မသင့်လျှင်အိမ် ထောင်ပင်ပျက်နိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသာပြောလိုက်ချင် သည်။မိမိချစ်ရသောသူကိုလိမ်ညာ ၍လက်မထပ်ချင်ပါ။မိမိအကြောင်း ကိုသာပြောပြပြီးကိုကိုကျော်၏အဆုံးအဖြတ်ကိုသာခံယူတော့မည်ဟု တွေးပြီး “ကိုကို့မှာအပြစ်မရှိပါဘူး၊အပြစ်ရှိတာကကေပါကိုကို” “ကေမှာဘာအပြစ်ရှိလို့လဲကေ” “ကိုကိုကျော် သေချာနားထောင်နှော် ပြီးမှ ကိုကိုကျော်စိတ်တိုင်းကျဆုံး ဖြတ်ပါ။ ချက်ချင်းလဲဆုံးဖြတ်စရာ မလိုသလို၊ကိုကိုကျော်ဆုံးဖြတ်ချက် ကိုလည်းကေကနားထောင်မှာပါ” “ကောင်းပြီလေကေ ပြောပါ” “ကေကအပျိုစင်မဟုတ်ဘူးကိုကို ကေမှာအရင်ကချစ်သူရှိခဲ့ဖူးတယ်” “အော်” “ကိုကို ကေ့ကိုလက်ထပ်ဖို့စိတ်ပျက် သွားပြီမဟုတ်လား” “ဘာလို့စိတ်ပျက်ရမှာလဲ” “ကိုကို ကေကကိုကို့ကိုအချစ်စမ်း နေတာမဟုတ်ဘူး၊အမှန်အတိုင်း ပြောတာပါ၊ကိုကိုစိတ်ပျက်သွားရင် နောက်ဆုတ်နိုင်ပါတယ်။ ကေစောဒကမတက်ပါဘူး” “မဟုတ်ဘူးကေ၊ကေ့ကိုကိုကိုလက်ထပ်မှာပါ” “သေချာစဉ်းစားပါကိုကိုကျော်၊အလျင်တလိုမဆုံးဖြတ်ပါနှင့်၊လက် ထပ်ပြီးမှသာကိုကိုကျော်ပြောင်းလဲ သွားခဲ့ရင် ကေဘယ်လိုမှရင်ဆိုင်နိုင် မှာမဟုတ်ဘူး၊အခုလိုအရဲစွန့်ပြီးအ ရှက်ကိုမငဲ့ဘဲပြောရတာလဲကေက လိပ်ပြာမလုံလို့ပါ” “ကေရယ်လူဆိုတာမှားတတ်တယ်၊ မမှားသောရှေ့နေ၊မသေသောဆေး သမားဆိုတာမရှိဘူး၊ငယ်ရွယ်တဲ့အ ချိန်မှာအချစ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တဏှာကြောင့်မှားတတ်ကြတယ်၊ဒါကိုနားလည်နိုင်ပါတယ်၊ပြီးတော့ဒါကို ကိုးကွယ်တဲ့အထဲမှာကိုကိုမပါဘူး၊ နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောမယ်ကိုကိုအ ရှက်ပြေပြောနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ကေကတရားဝင်ယောက်ျားရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ကိုကိုကေ့ကိုလက်ထပ်မှာပါ။ဒါလေးတစ်ခုကြောင့်ကိုကို ချစ်ခြင်းတွေဝေးကွာစရာ အကြောင်းမရှိဘူး” ကေကကိုကိုကျော်ရင်ခွင်ကျယ်ကို ဝင်ပြီးပြေးဖက်လိုက်သလိုကိုကိုကျော်ကလည်းကြင်နာယုယစွာဖက်ထားလိုက်သည်။
“ကေ ကိုကို့ကိုလက်ထပ်မှာလား” “အင်း” အဖြေပေးပြီးခြောက်လခန့်အကြာတွင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းမင်္ဂလာကိုမိဘများကဆောင်ရွက်ပေးကြ တော့သည်။ကေတွေးမိသည်က မင်္ဂလာဦးည…….။ “ဒေါက်..ဒေါက် ..ဒေါက်” “ကေရေ …” အခန်းတံခါးခေါက်ပြီးကေ့ကိုခေါ်သံ ကြားလိုက်ရသည်။တံခါးဆီသွားရင် “လာပြီးကိုကိုကျော်” ညဆယ်နာရီကျော်အထိ ကိုကျော်သူရသူငယ်ချင်းများနှင့် သောက်စားပြီးပြန်လာသည်။သို့ သော်အများကြီးသောက်လာပုံမရ အရက်နံ့သာရနေသည်။ “ကေကအရမ်းလှနေပါလားကေ” “ဟင် ဘယ်မှာ လှလို့လဲ” ကေရှက်မိတယ်။ညအိပ်ရင်ပေါ့ပေါ့ ပါးပါးအိပ်လို့ရအောင်ဂါဝန်ပဲအမြဲ ဝတ်ခဲ့တာ၊ကိုကိုကျောပြောမှဂါဝန်ကိုသတိထားမိတယ်။သူကအရမ်း ပါးသလိုလည်ပင်းကလဲဟိုက်နေ တယ်။မလုံမလဲဖြစ်မိတာကြောင့်စ ကားလမ်းကြောင်းလွှဲလိုက်သည်။ “အရမ်းများမူးနေလားဟင်” “မမူးပါဘူးကရေဲ့” “အများကြီးသောက်လာမှာစိုးလို့” “ဘာလို့အများကြီးသောက်ရမှာလဲ ကေရယ်၊ဒီနေ့ကကေ့နှင့်ကိုကိုကျော်တို့ရဲ့မင်္ဂလာဦးညလေ” “ညစာစားဦးမလားကိုကိုကျော်” “ဘာမှမစားပါဘူးကေရယ်၊ဗိုက် တင်းပြီးလေးနေမှာစိုးလို့” “ဟုတ်ကိုကိုကျော်ရေချိုးရင်ချိုး လိုက်လေ” “အင်းရေတော့ချိုးလိုက်ဦးမယ်” ကိုကိုကျော်တစ်ယောက်ရေချိုးခန်း ဝင်ချိန်မှာကေတစ်ယောက်ရင်ခုန်သ လိုထိတ်လန့်နေမိတယ်။ရေချိုးခန်းမှကိုကိုကျော်သဘက်ပတ်၍ထွက်လာရာ “ကိုကို ဒီမှာနှော်အဝတ်တွေ” “အေးပါကေ” ညဝတ်အိပ်သောအဝတ်တွေကိုကို ကျော်လှဲလှယ်ဝတ်နေစဉ်ကေမျက် နှာလွှဲနေလိုက်သည်။ “ကေ” “ဟင်” ကိုကိုကျော့်ခေါ်သံကြောင့်ရင်ထဲစိုးရိမ်စိတ်ဝင်နေတဲ့ကေ့ရင်ထဲထိတ်က နဲဖြစ်သွားသည်။
“အိပ်ကြမယ်လေကေ” “ဟုတ် ဟုတ်ကိုကိုကျော်” ကေကုတင်ပေါ်တက်လိုက်တော့ ကိုကိုကျော်လဲကုတင်ပေါ်ထိုင်ပြီးလှဲချလိုက်ရင်းကေ့ကိုဖက်ထားသည်။ “ကေ ကိုကိုကျော်လေကေ့ကိုတကယ် ပိုင်ဆိုင်သွားပြီနှော်” “မင်္ဂလာတောင်ဆောင်ပြီးပြီပဲကိုကို ကျော်ရယ်” “အင်း ဒါကတော့ကိုကိုကျော့်ဘဝမှာတန်ဘိုးအရှိဆုံးအရာတစ်ခုကိုရလိုက် တာပဲကေ” “ကိုကိုကျော်တို့ယောက်ျားလေးတွေကမရခင်ဖျာလိုလိပ်ခေါင်းပေါ်တင် ပြီးရမှဖျာလိုနင်းချေတာမျိုးလုပ် တတ်ကြတယ်ဆို” “ကိုကိုကျော်ကအဲဒီလိုလူမျိုးမ ဟုတ်ရပါဘူးကေရယ်” “နောက်မှအပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးအပြစ် တွေရှာပြီးစိမ်းကားဖို့တော့မလုပ်ပါ နဲ့ကိုကိုကျော်” “ကေကိုကိုကျော်ကကေ့ကိုအရမ်း ချစ်တာ၊ကေကရောကိုကိုကျော်ကို ကိုကိုကျော်ချစ်သလောက်ပြန်ချစ် ဖို့ပဲမျှော်လင့်နေတာ” “အရမ်းချစ်လို့လဲလက်ထပ်ခဲ့တာပဲ ကိုကိုကျော်ရယ်၊ ကိုကိုကျော်က ကေ့ရဲ့ပါးပြင်ကိုမြတ်နိုးစွာနမ်းရှိုက် လိုက်ပြီးနောက်ကေ့နှုတ်ခမ်းလေး အားငုံစုပ်လိုက်သည်။ လင်မယားအ ရာမြောက်ပြီးမင်္ဂလာဦးညမှာပဲလိုး တော့မည်ကိုသိနေတဲ့ကေမှာကိုကို ကျော့်အပြောနဲ့အကြင်နာများ ကြောင့်ကာမဆက်ဆံဖူးတဲ့မိန်းက လေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပိပိမှာစိုစိပြီး လာတော့တယ်။ကိုကိုကျော်ကကေ ကိုမျက်နှာဆိုင်ချင်းဆိုင်ဖြစ်စေရန်ဖက်ကာဆွဲယူလိုက်သည်။မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်လာမှ ကိုကိုကျော့်လီးကြီးကကေ့ဗိုက်ကိုထောက်နေသလိုဖြစ်နေပြီးကေလည်းနည်းရှက်ရွံ့သွားမိရပြန်သည်။ ‘
မျက်နှာချင်းဆိုင် တဲ့အခါကေ့နှုတ်ခမ်းကိုလာနမ်းစုပ် တော့တယ်။အစကတော့ကြောက်လန့်ပြီးရှောင်မလိုလုပ်ပေမယ့်နှုတ် ခမ်းချင်းထိသောအခါမှာတော့ကာမနတ်၏ဖမ်းစားခြင်းကိုကေခံ လိုက်ရပါပြီ။အနမ်းကျွမ်းကျင်လှတဲ့ကိုကိုကျော်ကြောင့်ကေလဲတုန့် ပြန်နမ်းမိတယ်။ကိုကိုကျော်ရဲ့အ နမ်းတွေကရဲဆေးတင်ထားသောအရက်ကြောင့်လားမသိပါ။ကြောက်စ ရာကောင်းလောက် အောင်ပြင်းထန်တယ်။ရမက်တွေနဲ့ မို့ကေ့တကိုယ်လုံးလဲကိုကိုကျော်ရဲ့ ပွတ်သတ်ပေးမှု့တွေကြောင့်ကြက်သီးနွေးဖုတွေပါထလာရသလိုကာမစိတ်တွေလဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးပိပိထဲအ ရည်တွေစိုလာခဲ့တယ်။ဂါဝန်ကိုမ တင်ပြီးလက်ကဘော်လီချိတ်ဆီ ရောက်လာကာချိတ်ကိုဖြုတ်သွား ပြန်တယ်။နောက်တော့ဂါဝန်ကိုပါ အပေါ်ထိလှန်ကာပြူးပြီးဖွံ့ထွားလှတဲ့ကေ့ရဲ့နို့ကိုတပြွတ်ပြွတ်စို့တော့ တယ်။ “ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ်” “အာ့! အိုး ကိုကိုရယ် အင်းဟင်း ဟင်း” နို့စို့ခံဖူးပေမယ့်နို့စို့မခံရတာကြာပြီဆိုတော့နာသလိုကျင်သလိုဖြစ် ပေမယ့်တကယ်တမ်းကျတော့ကေ စိတ်တွေထလာခဲ့တာပါ။ဘယ်ညာလှည့်စို့ပြီးနောက်မှာတော့ကေပိပိလဲစိုရွှဲနေပြီလေ။ ကိုကိုကျော်ကကေ့ပေါင်သားတွေကိုပွတ် သပ်ပြီးကေပိပိကိုလာပွတ်ချိန် မှာတော့ကြက်သီးနွေးဖုတွေထကာ ပိပိထဲကအရည်ကပေါင်ခြံထဲစီး ဆင်းသွားရပြန်တယ်။ပိပိကိုလာ ပွတ်ပြန်တယ် “အာ့! အင်းးဟင်းးကိုကို” နှုတ်ကလည်းမငြင်းဆန်ချင်သလို ခန္ဓာကိုယ်ကငြင်းဆန်ဖို့အားမရှိ တော့ပါ။လင်ယောက်ျားနှင့်အပြိုင်သာကာမအလိုကိုစိတ်ကအလိုလိုက်ချင်နေပါပြီလေ။အကွဲကြောင်း တလျောက်စုံဆန်ပွတ်ပြီးကာမစေ့ကိုပါမထိတထိပွတ်ပေးလေတော့ ကေ့မှာနေလို့မရအောင်ကာမ စိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ရပြီ။မျက်လုံးမှိတ်ပြီးညည်းတွားမိသည်။မျက်လုံးဖွင့် ကြည့်ချိန်မှာတော့ကိုကိုကျော့် မှာအောက်ပိုင်းအဝတ်အစားတို့မရှိတော့ချေ။ကေ့မှာတော့ ကိုကိုကျော်နို့စို့ပေးခြင်းကြောင့် နို့သီးခေါင်းတွေလဲစူထွက်လာပြီ။အတင်းကာရောစို့တာမဟုတ်ပေမယ့်အထိအတွေ့တို့ရှိခဲ့ဖူးခြင်းတို့ ကြောင့်ပင်တချက်တချက်မှာကော့နေအောင်ခံစားမိရသည်။
နို့စို့ပြီးနောက်ကိုကိုကျော်ရဲ့မျက်နှာကကေ့ပေါင်ကြားမျက်နှာအပ်ပြီး တချက်မျှသာအကွဲကြောင်းတ လျှောက်လျှာဖျားနှင့်ကလော်လိုက်ရာ “အား ကိုကိုမလုပ်နဲ့ကွာ၊အား ကျွတ် ကျွတ်” ချစ်လင်ကိုကိုကျော်ကိုအားနာမိ သည်။ချစ်သူဟောင်းလိုးခဲ့ဖူးသော အဖုတ်ကိုကိုကိုကျော်ကအားရပါးရ ယက်နေသည်။ မျက်လုံးကိုစုံမှိတ်ပြီးအော်လိုက် သည်။ကြက်သီးထပြီးခါးပါကော့ သွားရတယ်။ချစ်လင်ဖြစ်သူကိုကို ကျော်ဘုန်းနိမ့်မှာလဲစိုးရိမ်သွားပြီး အတင်းပင်ကိုကိုကျော့်လက်ကိုဆွဲယူလိုက်တော့ “မတားနဲ့တော့ကေ၊ကေစိတ်အရမ်း လာနေမှအဆင်ပြေမှာ” “မလုပ်ပါနှင့်ကိုကိုနှော်၊တော်ပြီ၊အ ရမ်းအားနာလို့” “အားနာရင်ပြန်လုပ်ပေးပေါ့” “လုပ်ပေးမှာပေါ့ကိုကိုရယ်” ကေကကိုကို့ကျော့်ကိုအတင်းလှမ်း ဆွဲလိုက်သည်။ ကိုကိုကအလိုက်သင့်ပါပြီးကေ့ရဲ့အပေါ်တက်လာကာကေ့ ပေါင်နှစ်ဘက်ကိုကားပြီးဒူးထောက် လိုက်သည်။ထိုနောက့်ကေ့ပိပိအဝကိုတေ့ပြီးအသာဖိထည့်တော့ “ဗျစ် ဗျစ်ဗြိ” “အာ့! ကိုဇော် နာတယ်” အလိုးခံရပြီဆိုတဲ့အသိကရင်ထဲ လှိုက်ကနဲဝင်လာသည်။အလိုးမခံရတာနှစ်ကြာပြီမို့အပျိုစင်မဟုတ် သော်လည်းနည်းနည်းတော့နာသည်။အဖုတ်တစ်ခုလုံးပြည့်ကြပ်နေ သည်။ နာသည်ဟုအော်လိုက်မိ၍ကိုကို ကျော်အတင်းအကြပ်တော့မလုပ်ပဲကေရဲ့နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်နမ်းပြန်တယ်။စိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်ရသည်မသိ ကိုကိုကျော်အားဖက်ထားပြီးပြန် နမ်းစုပ်လိုက်သည်။ထိုစဉ်ကိုကို ကျော်ကဆတ်ကနဲထိုးသွင်းလိုက်ရာလီးကအိကနဲတဆုံးဝင်သွားတော့ သည်။ထိုအချိန် တွင်ကိုကိုကျော်ကတချက်မျှရပ်သလိုဖြစ်ပြီးတွေဝေသွားသလိုဖြစ် သွားသည်ကိုကေမြင်လိုက်သည်။
မိမိအပျိုမစစ်သည်ကိုများစိတ်ပျက်လေသလားဟုတွေးမိပြီးစိတ်ထဲ ထင့်သွားသည်။သို့သော်ကိုကိုကျော်အားမိမိပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြခဲ့ ပြီးဖြစ်ရာကေအနေနဲ့လိပ်ပြာ လုံသော်ငြားချစ်သောလင်အတွက်မူကေစိတ်မကောင်းပေ။ ထိုအတွေးကြောင့် ပင်ကေတစ်ယောက်စိတ်မသက်မ သာဖြစ်သွားရသည်။ “ကေဘာတွေးနေတာလဲ” “ဟင် ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကိုကို” “ဘာမှတွေးမနေနဲ့ကေ ၊ကိုကိုက ကေ့ကိုအမြဲချစ်မှာပါ” “ကေကအားနာတယ်” “ဟာကြာ…” ကေမှာစိတိသက်သာရာရသွား သဖြင့်နောက်ထပ်မတွေး တော့ပဲကိုကိုကျော်လိုးသည်ကိုစိတ်ပါလာခဲ့သည်။ “ဗျစ် ဗျစ် ဗျိ ဘွတ် ဖွတ်ဖွတ်” “အာ့! အိုး အင်းဟင်းးဟင်း” တင်းကျပ်ကျပ်တစ်ဆို့ဆို့အရသာ နှင့်အတူပိပိအတွင်းသားလှုပ်ရှား လာပြီးအရည်တွေပိုထွက်သလိုခံ စားရလာတယ်။တကယ်တမ်းတော့ကေကခံနိုင်ပါပြီသို့သော်ကိုကိုဆက် မလှုပ်ရှားပဲရဲ့နို့တွေကိုပါပွတ် သပ်ပေးတဲ့အခါအလိုလိုညည်း သံပေးမိတယ်။ညည်းသံထွက်မှ ကိုကိုကျော်ကလီးကိုတဖြေးဖြေးနှင့်နှုတ်ယူပြီးဖြေးဖြေးချင်းအသွင်းအထုတ်လုပ်တော့တယ်။ အစေ့ကိုလဲထိသလိုအတွင်းနှုတ်ခမ်းသားများကိုပွတ်ဆွဲသွားတဲ့ကိုကိုကျော့်လီး ကြောင့်ပိပိကအရသာတမျိုးကိုပါခံစားလိုက်ရသည်။ “ဖွတ်!ဖတ်..ဖတ်..ဖတ်” ဆီးခုံချင်းတဖတ်ဖတ်ရိုက်မိနေသလို လီးကတဇွိ ဇွိ တဗျိဗျိ ဝင်နေတော့ မျက်လုံးကိုစုံမှိတ်ပြီးညည်းမိတော့ တယ်။နည်းနည်းမြန်လေအရသာ တွေ့လေပိုညည်းမိတော့တယ်။
“ဗျစ်! ဘွတ် !ဖတ်! ဖတ် ဖန်းဖန်းးး” “အင့်! အိုးးအင်းးဟင်းးဟင်းး” ဘယ်လိုသဘောကြောင့်ရယ်ကေမသိတော့ကိုကို့ခါးကိုသာအတင်း ဖက်ထားပြီး နေချင်တော့တယ်။ ခါးကိုလှမ်းဖက်တော့လိုးတဲ့အရှိန် နှေးချိန်မှာတော့ကေအား မရတော့ပေ။ခါးကိုလွှတ်လိုက်ပြီး မြန်မြန်ဆောင့်စေဖို့သာခါးကိုလှမ်းဆွဲပြန်တွန်းတဲ့အမှု့ကိုမသိစိတ်ထဲကလုပ်ပေးနေမိပြီးကိုကိုကပိုမြန် လာသည်နှင့်အမျှ “ဖွတ် ဖတ် ဗျိ ..ဗျစ်ဖန်းးးဖန်းဖန်း” “အာ့!ရှီးးရှီးးး အိုးးအားအင်းဟင်းး” ကြားဖူးနေသောကာမအမှု့ပြီးတယ် ဆိုတာကိုသတိရလိုက်ပြီးအထွဋ်အထိပ်သို့ရောက်နေပြီဆိုတာသိလိုက် ရတော့တယ်။ “ဘွတ် ဖွတ် ဖွတ် ဖန်း ဖန်းးဖန်း” “အားရှီးးရှီးးအိုးးး” ပိပိအတွင်းလှုပ်ရှားမှု့များနှင့်အတူ ကေမှာအရည်တွေစီးဆင်းသွားသလိုခံစားလိုက်တယ်။ဆက်လက်မ ညည်းနိုင်တော့လောက်အောင်အားအင်ကုန်ခမ်းသလိုဖြစ်သွားပြီးငြိမ် သွားရတယ်။ကိုကိုကတော့မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး ဆက်လုပ်ရာကေလဲ သူပြီးအောင်လုပ်ပါစေဆိုပြီးလွှတ် ထားလိုက်တယ်။ကေပြီးပြီး ငါးမိနစ်ခန့်ကြာသောအခါမှာတော့ကိုကို့ဆီက “အင်းးအားးး ရှီးးးရှီး ဟားးး” တနှာသံထွက်လာပြီးအတင်းလိုး တော့တယ်။ မကြာပါဘူး၊ပိပိထဲ ပူနွေးနွေးသုတ်တွေဝင်လာပြီး ကိုကိုကျော်ကလီးကိုအဆုံးထိသွင်း ပြီးနောက်ကော့ပြီးပန်းထည့်လိုက် ရာအဖုတ်ထဲသုတ်ရည်တို့ပြည့်လျှံသွားတော့တယ်
ထိုနောက်တော့ကိုကိုကကေ့ဘေး ဝင်အိပ်ကာကေကိုနမ်းပြီး “ကေကောင်းရဲ့လား” “အာကိုကိုကလဲ” “ဘာလဲရှက်နေတုန်းပဲလား” “အင်းပေါ့” “ခုကိုကိုနဲ့ကေလိုးပြီးပီ၊တကယ်လင်မယားဖြစ်သွားပြီလေ” “အာ ကိုကိုကလဲနားရှက်စရာတွေ” “ရှက်စရာမလိုပါဘူးကေရယ်၊ နောက်ထပ်လဲလိုးအုံးမှာ” “နောက်ကြိုက်တဲ့အချိန်လုပ်လို့ရ တာပဲကိုကိုရယ်။ခုတော့ကေ လဲကြိမ်းစပ်နေပြီ၊မနက်ကျလမ်း မလျောက်နိုင်ရင်ရှက်စရာကြီးဒီနေ့တော့ကိုကိုလဲမောနေပြီမ ဟုတ်လားအိပ်ကြရအောင်နှော်” “အင်း ပါကေ” ထို့နောက်တော့ကေ့အားဖက်ကာ အိပ်ပျော်သွားတော့တယ်။ကေမှာသာချက်ချင်းအိပ်မပျော်နိုင်၊ကိုကို ကိုကြည့်ပြီးသနားပြီးစိတ်မကောင်း ပေ။မိမိတွင်လည်းအပြစ်မကင်းဟုဆိုကာစိတ်ဆင်းရဲရသည်။ မိမိ၏ထိုအပြစ်ကြောင့်ပင်အိမ် ထောင်သက်ကြာလေကိုကိုကျော် အားစိတ်မချဖြစ်ပြီးသံသယဝင်ကာ အိမ်ထောင်ရေး၌အဖုအထစ်တို့ဖြစ် ရသည်။ ယောက်ျားတို့မည်သည်မှာလည်း မိမိ၏ဇနီးသည်အားခြောက်ပစ် ၀ကင်းသဲလဲစင်သာလိုချင်ကြသည်မဟုတ်လား။ ၎င်းယောက်ျားတို့သာလျှင်လူပျိုစစ်ချင်မှစစ်မည်။ ဇနီးမယားတို့ကိုကား အပျိုစစ်မှလိုချင်တတ်ကြသည်။ ၎င်းတို့ဖောက်ပြန်ကြသည့်အခါတွင် မူဇနီးသည်၏အပျိုမစစ်မှု့ကိုယိုး မယ်ဖွဲ့ပြီးအပြစ်ပုံချကာအနိုင်ယူ တတ်သည်ဖြစ်၍တနေ့နေ့တချိန်ချိန်တွင်ကိုကိုသည်ကေ့အားထိုအပြစ်တစ်ခုကိုယိုးမယ်ဖွဲ့ပြီးအနိုင်ယူမည် ကိုတွေး၍အမြဲစိတ်ဆင်းရဲရတော့သည်.